Warbix Dagaal Aan Saaka Waxba La Iskula Harrin Oo Ka dhacay Bariga Gobalka Mudug Godad – Allpuntlander.com
Saaka 5 subaxnimo ayay maleeshiyaad Galmudug weerar kusoo qaadeen xoolo dhaqato ku sugan baadiyaha tuulada Godad ee ku taal bariga Gaalkacyo Gobalka Mudug daanta Puntland.
Maleeshiyaadka Galmudug ayaa la sheegayaa in ay saaka wateen 20 Baabuurta dagaalka ee Soomaalidu u taqaan tignikada, waxaana wararku sheegayaan in maleeshiyaadka Galmudug maalmahaanba is diyaarinayeen.
Dagaalkaan ayaa daba socda dagaal dhacay wiiggii hore.
Dagaalkii wiiggii hore ayaa sabab u ahaa dhul daaqsin dhanka Puntland oo roob ka da’ay oo ay kusoo hayaameen xoolo dhaqato reer Galmudug oo ay galbinayaan ciidan tigniko wata oo Galmudug ah.
Odayaasha deegaanka ee Puntland ayaa xoola dhaqatada Galmudug ka codsaday in ay dhulka daaqaan, laakiin ay joojiyaan ciidanka tignikadaa ee daba socda xoolo dhaqatada soo naqraacay, waxaana xigtay dagaal dhexmaray labada dhinac oo murankaas ka dhashay.
Dagaalka saaka ayuu khasaare baaxadle ka dhashay, waxaana isbiaalada Gaalkacyo laba daan lasoo gaarsiiyay dhaawacyo.
Maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday ayaa wararku nagu soo gaaraayaan in loo durjiyay dhankii ay weerarka kasoo qaadeen.
Dhanka Puntland isbitaalka waxaa la keenay illaa 12 dhaawaca oo waliba 2 ay dhaawac cusus yihiin, dhimashaduna waa 3 illaa iyo hadda intaan maqalnay.
Dhanka Galmudug ayay wararku sheegayaan in ay kasii khasaaro badan yihiin dhanka Puntland, niman saraakiisha dagaalka ee Puntland waxay sheegeen in ay 5 dhimasho ah oo Galmuduga ugu tageen saldhigii ay weerarka kasoo qaadeen maleeshiyaadka Galmudug.
Dhanka kale, saaka waxaa ay la jaray warbaahinta aagga mudug Puntland, waxaana laga jaray dhanka Galmudug oo maamusha shirkadaha Taleefoonada, waxaana arrinkaas aad uga cabanayay dhaliyaradii xoolo dhaqatada ahayd ee iska difaacayay maleeshiyaadkii soo weeraray ee Galmudug.
Gen Maxamed Abshir Muuse Oo Xalay Ku Geeriyooday Minneapolis/USA